Home /Blog/Waddamo Europe Ka Tirsan oo Diiday in Shacabka Turkiga isku-soobax Sameeyaan
Madax ka tirsan dhowr waddan oo Europe ku yaala ayaa diiday in isku-soobax lagu taageerayo siyaasiyiinta Turkiga ee aftida u raadinaya in dastuurka dalka wax laga baddalo.
Rotterdam ee dalka Holland ayaa yiri “Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkey Mevlut Cavusoglu kuma qaban karo wax isku soo bax ah Hoolka weyn ee ku yaalla dekedda Rottendam sababo ammaanka khuseeya awgood.”
Waddamada Austria & Switzerland ayaa iyaguna tallaabo caynkaas ah qaaday.
Arrintan ayaa kasoo curatay markii dowladda Germany ay diiday isku-soobax afti loogu raadinayay in dastuurka dalka Turkey wax laga baddalo laakiin Berlin ay diiday taasoo sababtay in Mr, Erdogan uu ku tilmaamo dowladda Germany inay leedahay dhaqankii NAZI.
Hadalkaasi wuxuu sababay in mustashaarka Germany Angela Merkel ay hadalka Erdogan kaga jawaabtay “Maaha wax la aqbali karo.”
Xisbi-xaakimka Turkiga ayaa cod u raadinaya in madaxweyne Erdogan lasiiyo awood dheeraad ah, taasoo ay siyaasiyiinta AK-Party ay dibadda & gudaha waddankaba cod ugu raadinayaan aftida la qaadi doono 16 April.
Xisbigu wuxuu bartilmaameedsanayaa dad Turki ah oo ku kala nool Europe oo ay ku jiraan 1.4 milyan oo deggen Germany.
Duqa magaalada Rotterdam Ahmed Aboutaleb ayaa isagoo warfidiyeennada la hadlaya wuxuu yiri, “Waa diblomaasi xil naga mudan, waxaan ula dhaqmi doonaa si xushmadi ku jirto, laakiin waxaan leenahay sharciyo xannibaya isku imaatinka goobaha caamka ah.”
Xiriirka ka dhexeeya Turkey & Europe ayaa meel xun gaaray wixii ka dambeeyay afgabigii dhicisoobay dhiiguna ku daatay ee dhacay 15kii Julay sanadkii hore.
Simba News, Oslo Norway.
War lagu Farxo ooo ka soobaxay Xafiiska Ra’iisulwasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre